. ojooo မှာငွေရှာနည်း guide ~ ဗိုလ်လှိုင်း (ဆိပ်ဖြူသားလေး)
Home » အွန်လိုင်းငွေရှာနည်းများ » . ojooo မှာငွေရှာနည်း guide
ojooo ဆိုတဲ့ ဆိုဒ်လေးကတော့ 2013 မှပေါ်လာတာပါ။သက်တမ်း က 8 လကျော်ပဲရှိပါသေးတယ်။ဒါပေမယ့်ယုံကြည်လို့ရတဲ့ ဆိုဒ်တစ်ခုပါပဲ။ကျနော် ကိုယ်တိုင်လဲ ငွေ 2$ ထုတ်ကြည့်တာ 1 ရက်ပဲစောင့်လိုက်ရပါတယ်။paypal ထဲကိုရောက်လာပါတယ်။တစ်နေ့ကလစ်ခက 0.025$ ၀န်းကျင်လောက်ပဲရပေမယ့် တဖြည်းဖြည်းနဲ့နာမည်ရလာတဲ့ ဆိုဒ်မို့လို့ ဒီဆိုဒ်မှာလဲ main မဟုတ်တောင် အရန်အနေနဲ့ ကလစ်သင့်ပါတယ်။တစ်ခြားဆိုဒ်တွေကလစ်ရင်းနဲ့ သူ့ဆိုဒ်ကိုလဲ ဖွင့်ထားပြီးကလစ်လို့ရပါတယ်။2 ဒေါ်လာပြည့်တာနဲ့ထုတ်ပေါ့။မိန်းဆိုဒ်မှာ ထည့်ရင်းဖို့ အထောက်အကူရမှာပါ။အောက်မှာ အသုံးပြုပုံ guide လေးကြည့်လိုက်ရအောင်..
မန်ဘာဝင်ရင်တော့ ဒီလင့်က၀င်ပေါ့ http://wad.ojooo.com/index.php?ref=zarnitun
ပုံမှာ မန်ဘာဝင်ပုံကိုကျနော် နမူနာဖြည့်ပြထားပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ နာမည် ကိုယ့်ရဲ့ gmail ကိုယ့်မွေးနေ့ ကိုယ်ဖွင့်ထားတဲ့ paypal email အဲဒါတွေကိုတော့ အသုံးပြုမယ့်သူရဲ့ အချက်အလက်တွေ ထည့်ပေးရမှာပါ။အားလုံးဖြည့်ပြီး ရင်တော့ အောက်ခြေက register ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ကိုယ့် ရဲ့gmail ထဲကို အီးမေးတစ်စောင်ပို့ထားပါလိမ့်မယ်။ပို့ထားတဲ့ အီးမေးလ်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ confirm လုပ်လိုက်ပါ။confirm လုပ်ပြီးရင်တော့ ကြော်ငြာတွေကလစ်ပြီး ငွေရှာလို့ရပါပြီ။ကြော်ငြာတွေကြည့်ဖို့အတွက်အောက်မှာကြည့်လိုက်ပါ။
မျှားပြထားတဲကနေရာကို ကလစ်ထောက်ပြီး paid to click ads ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
ပုံမှာ တော့ အေ၇ာင်မှိန်နေတဲ့ ကြော်ငြာတွေကကြည့်လို့မရပါဘူး။upgrade လုပ်ထားတဲ့သူတွေပဲကြည့်လို့ရတာပါ။ကြော်ငြာကြည့်ဖို့ အပြာရောင် စာတန်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင် မျှားပြထားတဲ့အတိုင်း အ၀ါရောင်အစက်လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။အစက်လေးကို ကလစ်လိုက်ရင် new tab တစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။တစ်ခါတစ်လေမှာတော့ အစက်လေးမဟုတ်ပဲ တြွိဂံ ဒါမှမဟုတ် စတား လးပေါ်ပါလိမ့်မယ်။ပေါ်လာတဲ့ ဟာကိုနှိပ်ရမှာပါ။
new tab မှာတော့ ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတန်းလေးပြည့်အောင်စောင့်ရမှာပါ။အဲဒါပြည့်ရင်တော့ အမှန်ခြစ်လေးပေါ်လာပြီး ကြာ်ငြာကြည့်ခရပါပြီ။အဲဒီအတိုင်း ကြော်ငြာတွေကို ကုန်အောင်ကြည့်လိုက်ပါ။
ရထားတဲ့ပိုက်ဆံ ကိုတော့ your account ကိုနှိပ်ပြီးတော့ current balance မှာကြည့်လိုက်ပါ။ကျနော်ကတော့ 1.146 $ ရထားပါပြီ။2 ဒေါ်လာပြည့်ရင် ထုတ်လို့ရပါတယ်။ojooo မှာတော့ RR ငှားဖို့အတွက်2ဒေါ်လာပြည့်မှ upgrade and rental balance ထဲရွှေ့ပြီး RR ငှားရတာပါ။RR ငှားချင်ရင်တော့ purchase referrals ကိုနှိပ်ပြီးငှားလို့ရပါတယ်။ဆိုဒ်တိုင်းမှာ paypal ထဲကပိုက်ဆံကို ရွှေ့ပြီး RR ငှားလဲရပါတယ်။ကျနော့သဘောကတော့ RR တွေကို နဲနဲ နဲ့မငှားစေချင်ပါဘူး။အဲဒီတော့2$ ပြည့်တာနဲ့ ထုတ်လိုက်ပါ။ကျနော်လဲ ojooo က2ဒေါ်လာထုတ်ပြီးပါပြီ။ojooo ကိုတော့ ဆိုဒ်သစ်ပေမယ့် တဖြည်းဖြည်းနာမည်ကြီးလာတဲ့ ဆိုဒ်မို့လို့ အရန်ဆိုဒ်အဖြစ်လုပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ကျနော်2$ ထုတ်ထားတဲ့ payment proof လေးလေ့လာကြည့်ပါ....
ပိုက်ဆံရဖို့ တစ်ရက်ပဲ စောင့်လိုက်ရပါတယ်။